Mpanamboatra sy mpamatsy fanaterana lalamby | Ara-potoana
Fitaterana an-dàlambe sy lalamby avy any CHINA Hatrany EOPOPA - FANARAHAN-TRANSITRA & TRANSIT | QUOTE MAIMAIMPOANA | SINO SHIPPING Serivisy an-dalamby Miaraka amin'ny fotoam-pitaterana 16 ka hatramin'ny 20 andro, ny fitaterana an-dalamby dia haingana kokoa noho ny ranomasina ...
Làlana sy lalamby TransportAVY AMIN'NY CHINA Hatrany EOPOPA - FANARAHAN-TRANSIT & TRANSIT | QUOTE MAIMAIMPOANA | Fandefasana SINO
Serivisy fitaterana an-dalamby
Miaraka amin'ny fotoam-pitaterana 16 ka hatramin'ny 20 andro, lalamby entana dia haingana lavitra noho ny ranomasina entana izay maharitra 35 andro vao tonga any amin'ny seranan-tsambo frantsay any Le Havre sy Fos-Marseille (ohatra).
MAFY NY FANANJAN-TENY FA TSY MITSY ATAZA, FA MBOLA MORA MBA HATSARATRA.
Ity fomba an'ny Fitaovam-pitaterana dia mifanaraka tanteraka amin'ny vokatra indostrialy lafo vidy toa ny fiara, fitaovana elektronika ary fitaovana informatika ary koa ny vokatra fampiroboroboana sy fizaran-taona izay tsy maintsy tonga any amin'ny toerana alehany araka izay haingana indrindra.
Ny indostrian'ny lalamby dia namolavola sehatra vaovao mahomby, toekarena ary faharetana izay afaka mandika mivantana ny volanao. Ny fifandraisantsika amin'ireo mpandraharaha ny lalamby miaraka amin'ny fahaizantsika mihetsika amin'ny fivezivezena an-dalamby sy fiaramanidina dia midika fa afaka manolotra mahomby tokoa isikaFitaovam-pitateranavahaolana. Ny rehetra dia tohanan'ny serivisy manohana anay, toy ny fahazoan-dàlana, ny fikirakirana ny terminal, ny fizarana an-tanety ary ny fandefasana kilometatra farany.
RAIL FREIGHT dia tonga miaraka amin'ny tombony lehibe 3:
1) FAMONJENA NY Fotoana sy ny sarany
Ny vidin'ny zotram-pitaterana an-dalamby avy any / mankany Shina dia mety ho 50% mora kokoa noho ny entana amin'ny rivotra mandritra io dia io ihany. Ny fotoana fitaterana dia 45% ka hatramin'ny 50% fohy kokoa, raha ampitahaina amin'ny entana any an-dranomasinaTransport.
2) FOMBA FANAVOTANA FANAVOTANA
Ny fanambarana ny fadin-tseranana sy ny fanaraha-maso dia azo alefa haingana kokoa noho ny amin'ny resaka rivotra na entam-barotra an-dranomasina nentim-paharazana. Ity serivisy fadin-tseranana ity dia azo jerena amin'ny endrika serivisy feno 24/7, tantanan'ny ekipanay manatrika ao Shina.
3) SERVICA MORA MAFY
Entana marobe isan-karazany no ekena amin'ny fitaterana ary ny tolotra atolotra dia ahitana: fanaterana isan-trano, FCL sy LCL, entana mahazatra sy mampidi-doza.
GZ Ontime dia manolotra fiankinan-doha tsy manam-paharoa sy tsy fitoviana amin'ireo vahaolana momba ny kamiao eny an-dalana. Azontsika atao ny mampiasa ny fitaovana sy ny fahaizanao ilainao, na dia hafakely aza ny fandefasana anao. Ny matihaninay dia mampifanaraka ny zotram-pitateranao amin'ny fiara marina sy ny làlana mety, miaraka amin'ny fahaizana mandamina indray ny loharano raha miova ny toe-javatra. Izahay dia mamily ny fizotrany avy hatrany hatrany amin'ny farany rehefa manome vahaolana manokana hamaly ny filanao.
Vahaolana mety miovaova, tsy miankina amin'ny fananana
Lanja kely noho ny kamiao (LTL) - Mahita tahiry amin'ny lamin'ny fitaterana anao
Ny fitantanana ny enta-mavesatrao amin'ny alàlan'ny serivisy LTL no fomba tonga lafatra hanatsarana ny rojom-pamokarana ao an-trano. Yusen Logistics dia manolotra serivisy LTL fiaraha-miasa sy fanamafisana hampihenana ny vidinao ary hanatsarana ny fantsom-pizaranao.
Mitondra traikefa, fahaiza-mamorona ary fahitana amin'ireo fanamby fandefasana entana tsy dia misy kamiao loatra, dia miditra mandrindra sy manome lanja isaky ny mandeha izahay. Anisan'izany ny serivisy:
Serivisy amin'ny consultancy
Manampy anao hampivelatra ny tamba-jotra fitaterana intermodaly mahomby indrindra, mahomby indrindra, sisintany anatiny na fiampitana
Rehefa misafidy anay ianao, na dia mila serivisy fitaterana an-dalamby bebe kokoa aza ianao dia hamboarinay ny fomba fandefasana tonga lafatra ho anao. Manao izay fara herinay izahay mba hahatonga ny traikefan'ny fitaterana manontolo hihoatra ny antenainao.
2.Station amin'ny gara, isam-baravarana, isam-baravarana, toby isam-baravarana
6. Tracking ary soritry.
Ny fitaterana ny lalamby iraisam-pirenena dia ho sarotra amin'ny resaka antontan-taratasy, fitsipika, vidiny ary zotra. Mila manatanteraka fitantanana fitantanana, mamolavola fitsipika ary mitady ny vidiny ara-toekarena indrindra sy ny làlana hiatrehana izany. Ka avelao hanatsotra nyfampitaovanaho anao. ,
Ny ekipanay efa za-draharaha dia afaka manome fanampiana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny fitaterana, izay azo antoka fa afaka mamaly ny filanao rehetra izahay.
Teo aloha: Serivisy fanatobiana entana